Rooble oo Midowga Yurub siiyey xaqiijin ku saabsan doorashada Soomaaliya | Arrimaha Bulshada
Home News Rooble oo Midowga Yurub siiyey xaqiijin ku saabsan doorashada Soomaaliya
Rooble oo Midowga Yurub siiyey xaqiijin ku saabsan doorashada Soomaaliya
Sunday, February 27, 2022 News
Bulsha:- Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta kulan la qaatay Safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya Tiina Intelmann, ayaga oo ka wada hadlay qodobbo dhowr ah ku saabsan doorashooyinka, amniga iyo abaaraha ka jira dalka.
Sida lagu sheegay qoraal kasoo baxay xafiiska Rooble, ra’iisul wasaaraha ayaa siiyey safiirka xaqiijin ku saabsan in doorashada lagu soo geba-gebeyn doono waqtiga cusub ee loo qabtay oo ah 15-ka Maarso.
Qoraal ka soo baxay Xafiiska koowaad ee XFS ayaa lagu yiri “Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in howsha doorashada xildhibaannada Golaha Shacabku ay mareyso heer gebogebo ah, uuna filayo in ay ku soo dhammaato xilliga loo asteeyay ee 15-ka March, taas oo ay xigi doonto doorashada Guddoonnada Labada Aqal ee Baarlamaanka iyo Madaxweynaha Jamhuuriyadda.”
Dhanka kale kulanka Ra’iisul Wasaare Rooble iyo Safiiradda ayaa isku soo hadal qaaday taageerada Midowga Yurub ka geysanayaan gurmadka dadka Soomaaliyeed ee abaartu saameysay, iyadoo safiirku sheegtay in Midowga Yurub ay 41 Milyan oo dollar u qoondeeyeen gurmadka abaaraha ka jira dalka, ayna taageerayaan dadaallada Ra’iisul Wasaaruhu hormuudka ka yahay ee socda.
Kulanka Ra’iisul Wasaare Rooble iyo Safiirka Midowga Yurub ayaa sidoo kale looga hadlay xaaladda colaadeed ee ka dhalatay dagaalka Ruushku ku qaaday Ukraine iyo saameynta ay ku yeelan karto Yurub iyo guud ahaan dunida.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa muujiyay sida uu uga xun yahay xaaladdaas colaadeed, isagoo ku baaqay in wada hadal lagu dhammeeyo colaadda taagan.